Daawo: Madaxweyne ku xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo baardheere ka sameeyay arin aad loo hadal haayo kadib markii uu….. – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 18th April 2017 065
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland Maxamud Sayid Aadan iyo wafdi oo horkacaayo ayaa waxa ay gaareen magaalada baardheere ee gobolka gedo.
Maxamuud sayid aadan waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaraddaha magaalada baardheere waxaana soo dhaweyntiisa ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka dagmada baardheere kan gobolka gedo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Wafdiga madaxweyne ku xigeenka jubbaland waxaa kamid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha jubbaland wasiirka dhalinyarada isboortiska , wasiirk ku xigeenka wasaaraddaha howlaha guud iyo guriyeenta , wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo masuuliyiin kale.
Madaxweyne ku xigeenka jubbaland soo dhaweynta kadib waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada waxaana uu xariga ka jaray goobo mashaariic horumarineed ah oo magaalada laga hirgaliyay.
Goobaha madaxweyne ku xigeenka jubbaland uu xariga ka jaray waxaa kamid ah :-
Garoonka kubadda cagta baardheere, xarunta maamulka dagmada iyo xarun loogu tala galay in ay ku shiraan bulshada dagmada baardheere ee gobolka gedo.
Intaas kadib wafdiga madaxweyne ku xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan waxaa uu kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah isagoona ka dhageystay tabashooyinka ay qabaan.
madaxweyne ku xigeenka jubbaland oo shacabka la hadlay ayaa sheegay in baardheere ay tahay magaalo nabad doon tan iyo markii 2015-kii bishii 7-aad ay kala wareegeen alshabaab.
Xasaasi: Kheyre oo kulan deg deg ah la qaatay saraakiisha AMISOM iyo kuwa xooga dalka iyo hal arin oo lagu heshiiyay
War farxad ah: Dagmooyin iyo deegaanno ka tirsan gobollada baay iyo bakool oo roobabkii guga ay ka curteen
Daawo: Shirweyne qaran oo dib u heshiisiin ah ayaa maanta muqdisho ka furmay yaase ka qeyb galaya??
War Cusub: Maxaa ka jira In Dhaawac Culus uu soo gaaray Hogaamiyaha Kooxda Boko Haram